ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैनः उपप्रधानमन्त्री पोख्रेल - Everest Dainik - News from Nepal
ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैनः उपप्रधानमन्त्री पोख्रेल
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेलले अहिलेको अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु नै सबैको हितमा हुने बताएका छन् ।
प्रेस संगठन नेपाल, चितवन शाखाले आज (मंगलवार) भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।
‘बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुँदैछ, यो निर्वाचन ताजा जनादेशका लागि हुँदैछ’, उनले भने, ‘ताजा जनादेशमा जानुनै हामी सबैको हित हुन्छ । यसले नेपाली जनताले आफुले इच्छाएको पार्टी र प्रतिनिधिलाई मतदान गरेर बिजयी बनाउने अवसर आएको छ ।’
याे पनि पढ्नुस नेकपाः तल्ला कमिटीको एकता हुन किन ढिलाई ?
ताजा जनादेशमा जाने बिषय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नहुने भन्दैउनले भने, ‘ताजा जनादेशमा जाने कुरा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कसरी हुन्छ ? चुनाव टार्ने चुनाव हुन नदिने कोशिसहरुलाई पो त्यसरी भन्न सकिन्छ ।’ उनले चुनावमा सबै दल सहभागी हुने पनि बताए ।
उनले रानीजितिक स्थायीत्व र विकासका लागि नै हिजोको दिन पार्टी एकता गरिएको भएता पनि पुनः संकट आइपरेकोले अहिले ताजा निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भएको बताए ।
याे पनि पढ्नुस चेपुवामा ओलीः पार्टी निर्णय मान्ने कि विभाजन रोज्ने ?
उनले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरुले पनि तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
सो क्रममा बोल्दै पोख्रेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले नै सुर्य चुनाव चिन्ह पाउने बताए । निर्वाचन आयोगले सुर्य चुनाव चिन्ह खारेज गर्ने कुरा छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले नपाएर अरुले सुर्य चिन्ह पाउँछन् भनेर हामी विश्वास गर्दनौं ।’
याे पनि पढ्नुस ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेतालाई प्रचण्डले भने– जनयुद्ध कुहिएको फर्सी नै हो त ?
उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले अन्तरविरोध र ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रवृत्ति कारण नै अहिलेको अवस्था सृजना भएको उनको भनाई थियो ।